Kwenzeka njengalokhu: yonke into ilungile kunye nempilo, iivithamini zidakile rhoqo, kodwa oku kuphazamiseka rhoqo kwisisu ... Kungenzeka ukuba uye wahlaselwa phantsi kwegama elithi " isifo sengqondo sesisu ". Yintoni na indlela yokujongana nayo? Umzimba wesifazane, intlungu yesisu yimbangela eqhelekileyo yezifo.
Uyakwazi ukuthetha ngesifo sengqondo sesifo esilumkileyo xa i "lawulo lwesithathu" lugcwaliseka, oko kukuthi: ubuncinane kathathu ngeveki (njengomthetho, kusasa) ngeenyanga ezintathu zokugqibela enye yeentlobo ezahlukeneyo zokungahambi kahle zivela:
• ukubetha, okudlula emva kokukhupha;
• ingxaki epholileyo (efana nehudo), eyeka emva kokutyelela indlu yangasese;
• Ukungaqhelekanga (ezimbini ukuya kweyesithathu ngeveki) isitulo, umvakalelo wokuvuvukala nobunzima; Kodwa ukuphazamiseka kuyaphela emva kokukhawuleza.
Ngethamsanqa, kunokwenzeka ukukrazula ukungathandeki kwesisu esiswini. Ngenxa yoko kuyimfuneko ukufezekiswa kwengqondo. Kubaluleke kakhulu ukuba ezinye iintlobo ze-syndrome ziphathwa kuphela kunye nabaxinzelelekileyo kunye nezidalwa ezixhasayo. Akunakwenzeka ukuphilisa i-IBS ngaphandle kokubandakanyeka komonde. Emva kwakho konke, ngelixa umntu engasombululi ukuhlushwa kwengqondo, akayi kufumana umthombo wabo, ukususa isifo sengqondo sesilonda esicasulayo asinakwenzeka.
Ukunyaniseka kukunyanga lokuqala lokugula
Ukubonelela ngesilwanyana esicasulayo, esiza kukugaya ngaphandle kokuxhatshazwa. Ngalunye uhlobo lwesifo seentlungu esiswini esisinikiweyo sinobubungqina balo: xa ukuvuvukala kubalulekile ukukhuphela ishukela, ukupheka kwidlo; isonka esimhlophe, i-pasta, iphariji ecocekileyo. Ezi zokutya zibangela ukuvumba esiswini kwaye ziqinise ukuphosa; Ukuba unomlutha wohudo, kufuneka udle ipereji, irayisi, inyama ebilisiwe kunye ne-fat-fat cottage cheese. Bamba umthamo ogqithiseleyo kunye nokuphelisa ingxaki; kunye nokuqhawulwa, kufuneka ukwandise inani lefiber. Imithombo yayo eyona mveliso iifuno kunye neengqolowa ezipheleleyo. Ukuqhuba unyango lweziyobisi. Ukungabikho nto, akukho nto inokukhuthazwa, kuba nganye kwifomu yesifo kukho iziyobisi ezithile. Musa ukwesaba iziyobisi: kwindlela esetyenziswa rhoqo ngamayeza angabangeli umlutha kunye nemiphumo emibi. Ngokomzekelo, kwiimeko eziphazamisayo zeprobiotics eziqhelekileyo, ukulungelelanisa imeko ye-intestinal microflora. Ngokuqhaqhazela, ukuvuselela ngokunyanisekileyo i-peristalsis yamathumbu kuthetha. Kwaye ugqirha akaze adlulise izidakamizwa ezichanekileyo okanye izilwanyana - zinobukroti kwaye ziza kuphazamisa ingxaki. Ininzi idla ngokusetyenziswa kwemichiza-imithombo yefiber eyongezelelweyo kunye ne-pectin.
Kubaluleke kakhulu ukungadibanisi i-IBS ngokuqala kwezifo ezinzulu. Ehlabathini benza iluhlu "lweempawu zeebhogigi ezibomvu" zamkelwa. Ngoko, le nto ayisisisindo somzimba, ukuba: intlungu kunye nokukhathazeka kwenzeka ebusuku; Ingxaki iqala ukukhathazeka emva kweminyaka engama-50; kukho ukubonakaliswa okufanayo, umzekelo, igazi kwi-stool; Isihlobo esilandelayo sinomdla wezifo ze-oncological, umzekelo, umhlaza wekoloni; ukuba intlungu inamandla kwaye iqhubeka. Awuvele nje avuke kwaye adlule, kodwa akhathazeke kwaye athinte ubomi. Zonke ezi ziimpawu zamatye ezivusa umntu ukuba adibane nodokotela.
Yidla iibhunge ezininzi, udle ukutya okudliwayo, kwaye amathumbu akho aya kuhlala esebenza ngokugqibeleleyo. Ngaphandle koko, uya kuhlala uphazamiseka ngokunyanzeliswa kunye ne-intestinal colic. Ukuthintela oku kungenzeki, umntu kufuneka aqhube ubomi obuqhelekileyo, adle ukutya okusemgangathweni kwaye azi ukuba kusetshenzisiwe ukutya okuthosiweyo kunye nokutya okucokisekileyo. Mamela lethu icebiso!
Ityuwa nodaka loLwandle Olufileyo
Iimpawu kunye nokunyangwa kweengcambu zomzimba kubantwana besifazane
Indlela yokugcina isibindi esinempilo, ukucocwa kwesibindi, ukulahla amatye
Izithako, iimpahla kunye nokusetyenziswa kweoli ye-nuts yeoli
Ziziphi izinto ezinobungozi zobisi obunayo?
I-Milkshake nge-tshocolate kunye ne-mint
Iziyobisi zeHormon kwi-thyroid gland
Indlela yokwahlula isilikhi yobugcisa ukususela ngoku
Izinto zangaphakathi zasekhaya ngezandla zakho
Ukusebenza okusebenzayo kunye nabasetyhini
Indlela yokufaka ifompe xa unobanda
UGeorge Millar: i-biography, zonke iifilimu
Ziziphi iimveliso zobisi ezimbi-mveliso kufuneka zixakwe nge-dysbacteriosis
Amafutha abalulekileyo avela kumanqaku atyula
Ziziphi iinwele zeentombi ezifana namadoda: Isikhokelo esipheleleyo
I-Shrimp kunye nembewu ye-shrimp ne-pumpkin